UDragula nguRob Zombie - Okunye
Isihloko sivela kwigama lemoto kaTatomkhulu uMunster, iDRAG-U-LA, kumdlalo weTV wakudala IiMunsters , eyaqala ngo-1964-1966. Imoto yakhiwe malunga nebhokisi kwaye yenziwa ngesantya.
URob Zombie wasebenzisa i-macabre Iimonsters indlela yokwenza ingoma yemoto enobugcisa obothusayo. UDragula utshabalalisa konke kwindlela yakhe:
Ndifile ndiyimpuku, ndonwabela ikati
Ithenda ngoboya, uyafa njengokuba ucoca
'UDragula' yayiyingoma yokuqala uRob Zombie wakhululwa njengomculi yedwa emva kokuvala incwadi kwiqela lakhe elimhlophe iZombie. Uqhubeke waba ngumlawuli we-movie owoyikisayo, kunye ne-resumé ebandakanya iNdlu ye Izidumbu ezili-1000 kwaye UMtyholi Uyamlahla .
UZombie uyikhokele le vidiyo ngokwakhe, ebandakanya imifanekiso evela kwiimovie ezindala ezoyikisayo. Ifumene uninzi lweMTV, ngakumbi kumdlalo Ibhola yentloko . URiki Rachtman, owamkela iindwendwe Intloko Ukusukela ngo1990-1995, uxelele iiNgoma eziFumanekileyo: 'Ubehlala eligcisa elikhulu- hayi umculo kuphela, kodwa ukupeyinta, kunye nokubamba yonke loo midlalo' yama-70s / ukuxhaphaza. Kwaye ndicinga ukuba uyenzile kakuhle loo vidiyo kaDragula. ''
Amagama athethwe ekuqaleni ('iinkolelo, uloyiko kunye nomona') avela kumdlalo bhanyabhanya owoyikisayo ka-1960 IsiXeko sabaFileyo , apho kuthiwa nguChristopher Lee.
UJohn-Colorado Springs, CO
Oku kubonisiwe kwimbonakalo yokuqala IMatrix Umboniso bhanyabhanya, ovela ekuqaleni kwefilimu ka-1999 xa uNeo ekwiklabhu yomdaniso. Ezinye iifilimu zokusebenzisa ingoma zibandakanya:
Umsebenzi weparanormal 4 (2012)
Incwadi yeZithunzi: UBlair Witch 2 (2000)
Izandla eziMdaka (1999)
Uthotho lweTV ukuyisebenzisa kubandakanya:
Ifleshi ('IGoldface' - 2019)
Izibizo ('Ibhokisi: Icandelo 1' - 2002)
Kumkani weNduli ('Baleka kwisiQithi sePati' - 1999)
IAubrey-Cuyahoga Falls, OH
UJohn Hetlinger oneminyaka engama-82 ubudala idlale le ngoma Ngomhla wama-20 kuJulayi ka-2016 Italente yaseMelika . Uguqulelo oludlulileyo lukaHeflinger kukhuphiswano lweNBC oludumileyo lomboniso wePhuli yokuCwina 'Imizimba' yaya kwintsholongwane.
UHetlinger ucacisele i Iposi likaDenver ebesiya kwimivalo ye-karaoke e-Albuquerque, apho bahlala khona abantwana bakhe, okwethutyana xa u-DJ eSpectators Sports Pub naseGrill emcela ukuba amjoyine ngengoma. Esi sibini sathatha 'iDragula', sonwabile isihlwele sebha. 'Yayiyinto entle-indoda endala eyenza isinyithi,' utshilo uHetlinger, kamva wongeza, 'Andinalwazi lokuba lithetha ukuthini. Andinalwazi lokuba amagama athetha ntoni. Andinalwazi kwaphela. '
ifana nemvula ngosuku lwakho lomtshato
ngamanye amaxesha xa sichukumisa ukunyaniseka kakhulu
Inombolo yeengelosi ezingama-818 ezinentsingiselo
Indlela yobomi yenombolo 3